Sambava : Fitaovana nilatsaka avy eny ambony
lundi, 18 janvier 2021 08:06
Tsy nahita maso ilay fitaovana aho, eo ireo scientifique anamarina azy, fa ny fijeriko ny sary dia tsy anneau satellite izany io.
Ny Vaisseaux habités na ireny zanabolana misy olona ireny dia any amin'ny 200-800km miala ny tany, ny Satellite géostationnaire mampifandray antsika amin'ny téléphone ireny dia any amin'ny 35 000km miala ny tany.
Ny rivotra iainantsika anefa eo amin'ny 20Km eo fotsiny, ambanin'ny Strastosphère, ary mahatratra -56°C ny hatsiaka eo.
Betsaka ireo fako sy sattellite tsy miasa intsony no mifanaretsaka eny ambony eny, fa raha misy zavatra latsaka, dia mahatratra 2800°c ny hafanana rehefa hiditra ny rivotra iainantsika noho ny hafainganampandeha milatsaka sy ny fikasoka amin'ny rivotra.
Ka eto aho mahita amin'ny sary, tuyau plastique, sy kojakoja solaire, sy bidon, fil, panneau solaire izay tsy ahazaka velively na hatsiaka -50° raha nihoatra ny 20km ny haavony, ary indrindra moa raha anneau satellite no nilatsaka, dia nikarainkona toa ny kanety io vao tonga tety, tsy nisy dian'afo na ny kely aza io fitaovana io.
Noho izany na fitaovana andrana io na fitaovana fanaraha-maso biby sy zava-maniry, na fitaovana hitsikolovana fa ambany, tsy dia hinoaka loatra ity hoe fitsikolovana satria manana drone tsara lavitra noho izao izay te hanao an'izay.
Appareil amateur hoy aho, fa ny fanadihadiana ihany moa no amaritra an'izay.